> Resource > Video > Top 5 Free Video Splitters
Marka aad rabto in aad leedahay qaybo video gaar ah ka file weyn ama aad rabto inaad la gooyaa qayb gaar ah oo video ah, waxa ugu fiican in la sameeyo waa in aan kala tagno video ah. Maalmahan, tiro balaadhan oo ah software video splitter kaa caawin karaan howsha fududeyso. Ma ogi taas oo ka mid ah si ay u doortaan? Just hubi liiska video ah software ugu wanaagsan ee qaybsama videos hoos ku leenahay.
Free Video magaabay
Free Video magaabay ayaa a video splitter caan ah oo sano. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa kala duwan oo baaxad leh oo ah qaabab video, oo ay ku jiraan AVI, FLV, MOV, VOB, MKV, Xvid, Divx, Mp4, MPEG 1/2 iyo gelineya inaad la gooyaa oo kala video files galay qaybaha sida aad jeceshahay iyadoo sii video tayo wanaagsan .
Taageerada badan qaabab video;
User saaxiibtinimo interface;
Fursadaha qaab saarka Multiple.
Ka maqan ee tayada codka;
Ka yar goobaha codka.
Easy Video Splitter waa qalab si sahlan loo isticmaalo video tafatirka kaa caawinaya in aad kala video. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan AVI, MPEG, wmv iyo ASF. Waxaad isticmaali kartaa Fiidmeerta kitaabkii duudduubnaa si ay go'aan sax ah meesha aad rabto video ah in la jaro ama kala qaybsan video ku dura gaar ah. Waxaa sidoo kale ku qalabaysan function processing Dufcaddii-hab ah, kaas oo awood kuu kala dhowr files waqti.
Taageerada processing Dufcaddii.
The ka qabi karto ganaax kaliya waa mid ka mid jir waqti.
Avidemux waa splitter video kale oo lacag la'aan ah in loo isticmaali karaa in ay ku dhameysan hawlaha video tafatirka aasaasiga ah sida goynta video oo laga guurayo. Sidoo kale waa socon doono inta badan qaabab file video ay ku jiraan AVI, DVD files socon MPEG, MP4, ASF, iwm Si aad u isticmaasho barnaamijkan fudud, kaliya aad u leeyihiin in ay u guuraan dulqabo oo u fiirsada bilowgii video ah in aad kala qeybin doonaa .
Presets faa'iido leh hawlaha wax soo saarka caadiga ah.
Qaab ma aha mid aad qanci karo.
Haddii aad tahay qof user Windows ah, ka dibna freeware ah video splitter ugu fiican in aad ka faaiidaysan karaan waa Windows Live Movie abuuray. Waxay ku siin karaan aasaasiga ah video tafatir sida falinjeeerka, goynta, ku dar qoraalka, music iyo saamaynta. Halkan waa hage ku saabsan sida ay u kala jabeen video isticmaalaya software this.
Fursadaha video tafatirka kala duwan;
Fursadaha saarka kala duwan.
Waxaa bidbidayaan badan;
Versions badan oo kala duwan ee wax soo saarka ka mid ah;
Ma heli karaa mar dambe oo qayb ka ah Windows OS.
Dhinaca kale, haddii aad tahay user Mac ah ka dibna video ah splitter ugu fiican waa iMovie ah. Waxa kale oo ay bixisaa hawlaha video tafatirka fudud sida falinjeeerka, isagoo intaa ku daray caption iyo qoraalka, saamaynta gaar ah, oo maqal ah.
Hagaajinta tafatirka audio iyo madadaalo Movie isjiidka.
No tafatirka AVCHD hooyo ama dejinta toos ah;
Pre-processing iyo soo dejinta trans-sireed noqon kartaa mid waqti badan cunta.
Haddii aad rabto in aad si loo dhameystiro hawlaha video tafatirka badan oo horumarsan, ee Filmora waa waxa aad u baahan tahay. Waxay bixisaa hawlaha fudud sida video qaybsama, biirtay, lana siii iyo qoqobada iyo sidoo kale astaamaha kale oo xiiso leh waxaa ka mid ah Intro / credit, guurka, cut boodi, ka horimaanaya, wareeg ah usii iyo in ka badan. On top of in, waxaad si fudud u wadaagi kartaa video qof kasta YouTube ee Facebook, phone smart, ama gubi gal DVD ah. Kani waa barnaamij oo balan qaaday in qiimihiisu yahay isku dayaya. Hadda waxaa isku dayi baxay naftaada oo aad ku baran ay kala duwan yihiin!
Top 10 Free Video Joiners si fudud loo soo biir Your Videos
Top 20 Apps Best: Watch Live Football on TV
Waxaad u Baahan u Video ayeey: Video ayeey Qalab